Bubble fitsangatsanganana any Baltika: Latvia, Litoania ary Estonia dia manokatra sisintany anatiny indray
Home » Vaovao momba ny dia any Eropa » Bubble fitsangatsanganana any Baltika: Latvia, Litoania ary Estonia dia manokatra sisintany anatiny indray
Nanambara ny praiminisitra Latvian Krisjanis Karins androany fa nanaiky ny hanokatra ny sisin-taniny i Litoania, Latvia ary Estonia, amin'izay afaka mifindra malalaka eo anelanelan'ny firenena telo ny olom-pirenenan'ireo fanjakana telo any Baltika.
"Nanaiky ny fanokafana ny sisintanin'i Baltika avy amin'ny 15 Mey sy ny fivezivezena malalaka ho an'ny olom-pirenentsika," hoy ny bitsiky ny praiminisitra.
"Ireo olom-pirenena tonga avy any amin'ny firenen-kafa dia tokony hanaiky ny fitokanan-tena mandritra ny 14 andro," hoy i Karins nanampy.
Nilaza i Polonina tamin'ny faran'ny volana aprily fa ny olona miasa na mianatra akaiky ny sisin-tanin'ny firenena dia afaka miampita azy io tsy tapaka indray amin'ny volana Mey nefa tsy mila miatrika quarantine maharitra roa herinandro.
Ny famaha ny Covid-19 ny famerana dia hihatra amin'ireo monina any amin'ny faritr'i Alemana, Litoania, Slovakia ary ny Repoblika Tseky akaikin'ny sisin-tany miaraka amin'i Polonina.
Mandefa ny ATM Virtual ny tsena fitsangatsanganana arabo
London Heathrow: ny fizotran'ny fiarovana ny mpandeha vaovao dia misy fitsapana telo